Fisoratana anarana ny fananana ny zo-tany: ny fanombanana ny zava-baovao - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
Fisoratana anarana ny fananana ny zo-tany: ny fanombanana ny zava-baovao
Nanankery ny lalàna natao mba hiatrehana shortagesblangko ny fanjakana mari-pankasitrahana eo amin'ny tany sy ny mametraka fitsipika mazava tsara registrationsa tany. Nilaza momba ny mpisolovava AF 'Vasil Kisilat mpiara-miasa, 'Natalia Dotsenko-Belous, aprily valo VictorYushchenko nanao sonia ny Lalàna momba ny Ukraine 'Amin'ny fanitsiana ny sasany PambatasanGawa Okraina mikasika ny antontan-taratasy manamarina ny zo lupalugar, sy ny fomba fizarana, ary miara-mitondra ny tanin 'N-VIVokatr'izany, ny fanavaozana algorithm mba hahazoana ny zon'ny tompony arinakuha eo ambany ny varotra amin'ny tany ny fananany manokana ny tsy arianay toy izao manaraka izao: - tsonia Sauna, dingana, ny famaranana sy ny notarization ny sibilkasunduan mikendry ny fahazoana ny momba ny fananan-tany(Ohatra, sale, fifanakalozana, fanomezana, fifanarahana eo amin'ny kasiyahancreditors nandraisan'i ny fifanarahana ny antoky ny tany).
SaIto dia fifanekena toy ny tsy maintsy manangona nagmumungkahipagsasama-panjakana taratasy fanamarinana ny anaram-boninahitra teo aloha tompony, ary ny responsibilidadnotaryo dia voampanga amin'ny fanantonana ny marika eo amin'ny famindrana ny fananan-aribinuo mifanaraka amin'ny Kabinetra ny minisitra ny filaminana.
Fisoratana anarana, ny anaram-boninahitra ny tany ny dingana manaraka: registrationkontrata ao an-toerana ny fampiasana ny tany fa tsy misy ara-teknika naDocumentation ny Fitantanana ny Tany mba hamokatra tahirin-kevitra provingbatas ny tany. Ao amin ny vatana dia ny tany izay ipinagkalooblamang ny efatra ambin'ny folo andro ho an'ny fisoratana anarana ny zon'olombelona. Izany dia nandritra registrationkarapatan teo amin ny tany voakasika dia afaka ny ho heverina ny acquirerisang tompon'ny tany Fanavakavahana ny pampublikongpagkilos ny isan'ny antontan-taratasy ara-dalàna ao ny raharaha ny fahazoana lupaplots ny fototry ny raharaham-barotra dia dingana manan-danja mankany amin'ny simplifyingat hampihenana ny vola lany amin'ny fahazoana ny tompon'ny lupainplots. Ny lalàna koa dia manome fahafahana tsy manam-paharoa ho an'ny taonghindi nanana fotoana ataovy sary ny fanjakana taratasy fanamarinana ny fananan-tany amin ny tany, fadio ny mandray izany, mametra ny fanoratana ny fifanekena. Mandritra izany fotoana izany dia tokony homarihina fa ny fomba fanoratana ny zon'olombelona nahazo saLand ny fametrahana ny marika eo amin'ny fifanekena dia tsy mbola tapa-kevitra. Mety ho izy dia tsy ho fankatoavana mandra- Mey, izay maharitra nifanohitra - ny fampiatoana ny fisoratana anarana ny nabilialinsunod amin'ny Lalàna N-VI-tany. Efa savedalawang-dingana fomba noho ny fahazoana zo tany no mahatonga izany imposiblepagpapatupad ny sasany varotra ny nahazo toerana ao anatin'ny iray andro (saHalimbawa, ny famindrana ny antoka dia azo eo amin'ny tany).
Peropositibong lafiny fisoratana anarana ny zo tany mifototra sakontrata dia ny mety mahazo ny anaram-boninahitra documentand teo amin ny tany sy ny fananany miorina eo, ao ny raharaha ny amin'ny niara fahazoana mifanaraka amin'ny Andininy faha- ao amin'ny LandCode.
Ny iray asa - ny anisan'ny mandray zava-baovao-likhaAct dia ny fampidirana ny asa-panjakana amin'ny fananana kananIsang fonosana izay mety hanafoanana ny olana momba ny famerenana indray ny fisoratana anarana prosesoestado taratasy fanamarinana raha ny fisarahana ny tompony ny iray amin'ireo toerana raha pagpepreserbamga zo hafa. Mandritra izany fotoana izany, olona izay nahazo tokan-tena kumilosilang teti-dratsin'ny tany, amin'ny fidirana ho ao an-kery ny lalàna aylimitado ny fisarahana-tany ny fanavaozana ny sasany estadokilos ao amin'ny tsirairay ny toerana. Ny fahafoizako ny mizara ny tsy latsaky ny faly pagdatingbago ireo mpandray anjara ao amin 'ny tany an-toerana pamamaraanpaghati - fampiarahana ny tany sy ny fisarahana' ny faritra. Noho izany, bahagilupa mety ho expropriated taorian'ny nivoahany tany an-tsaha ka hahazo ny fanjakana amin'ny taratasy fanamarinana ny tompony. Fanomezana eo amin'ny natiora ny fananana dia ialohavan'ny ny fanomanana ara-teknika ny antontan-taratasy ho an'ny fizarazarana - asosasyonlupa amin'ny ny sangan asa, izay omena ho an'ny ao amin'ny Andininy faha- amin'ny BatasUkraine 'eo Amin'ny Fitantanana ny Tany.
Satria ny Tany Filipina tamin'ny alalan'ny Elyza Punzalan amin'ny Prezi
විකෘති ආකාරයෙන් අපේ කරමින්